Maxaa ka dhaxeeya Safarka Muuse ee Imaaraadka iyo Itoobiya iyo booqoshada Eritereeya? - Muqdisho Online
Home Wararka Maxaa ka dhaxeeya Safarka Muuse ee Imaaraadka iyo Itoobiya iyo booqoshada Eritereeya?
Maxaa ka dhaxeeya Safarka Muuse ee Imaaraadka iyo Itoobiya iyo booqoshada Eritereeya?
Safarka Wasiirka Arrimaha Dibadda dalka Eritereeya Cusmaan Saalax Maxamed uu ku tagay caasimadda Hargeysa ee dalka la magac baxay Somaliland ayaa dhaliyay su’aalo badan? Maxaa ku soo aadiyay Safarka Eritereeya ee magalaada Haygeysa maalin ka dib markii Ismaaciil Cumar Geele uu boqoosho rasmi ah tagay Soomaaliya? Maxaa ka dhaxeeya safarka Muuse Biixi ee Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta iyo Safarka Eritereeya? Farmaajo qayb intee ah ayuu ku leeyahay dhaqdhaaqa siyaasadeed ee Eritereeya?
Ila wareedyo ku dhow dalka Eriteeya ayaa u xaqjiiyay MOL in safarka Cusmaan Saalax Maxamed uu MW Farmaajo wax ka og yahay isla markaana lagu wargeliyay inta uusan Wasiirku u safrin Somaliland. Qorshahan ayaa waxaa qayb wayn wayn ka ah dalka Itoobiya. Dalka Eritereeya ayaan marnaba ogolaanaynin in Dowlada Jabuuti oo xiriir gaar ah (Special) la leh dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay saameyn ku yeelato siyaasadda Soomaaliya.
Abiy Axmad ayaa ka balan qaaday Farmaajo, hadii uu fuliyo qorshooyin badan oo Itoobiya ka leedahay dalka Soomaaliya lala heshiin doono Somaliland. Waliba safarkii ugu danbeeyay ee Farmaajo uu ku tagay Addis Ababa waxaa loo sheegay in Itoobiya ay awoodo in Farmaajo iyo Abiy Axmad oo wada socda ay booqosho lama filaan ah uga degaan magaalada Hargeysa. Farmaajo aya lagu yiri “waxa aad noqoneysaa Madaxweynihii ugu horeeyay ee laga dejiyo Hargeyso ilaa iyo dowladii Siyad Barre”.
MW Farmaajo ayaan marnaba ku wargelin MW Ismaaciil Cumar Geele qorshaha Dowlada Eritereeya ee Somaliland? Talabadaan ayaana markale god ku rideysa xiriirka ay Jabuuti isku dayaysan in mudo ah ay dib u soo nooleyso. Safarka Wasiir Cusmaan Saalax Maxamed ayaa ahayd in ay ka abuurto dardar siyaasadeed oo cusub taas oo indhaha Soomaalida ka soo wareejinaysa guushii ka dhalatay safarka MW Ismaacil Cuma Geele.
Dhanka kale Farmaajo ayaa ku been abuuray dalka Turkiga oo uu ka balan qaaday in ay ayagu hogaamin doonaan wadahdalka labada dhinac ee Soomaaliya iyo Somalinad,
Previous articleU.S. military kills 3 al-Shabab militants in Somalia
Next article(Deg Deg) Isku shaandheynta golaha wasiirada & magacaabista taliyeyaal cusub oo la isku raacay